Shaampiyoonaa Atileetiksii Afrikaa 12ffaa irratti Itiyoophiyaan warqee 4ffaa argatte
Monday, 09 March 2015 07:02
Finfinnee Guraandhala 28, 2007(Oromiyaa) Shaampiyoonaa Atileetiksii Afrikaa 12ffaa Finfinneetti dorgomamaa jiru irratti Itiyoophiyaan meedaaliyaa warqee 4ffaa argattee jirti.
Meedaaliyaan afraffaan dorgommii fiigicha meetira kuma shanii garee Dubartootaatiin taasifameeni.
Dorgoommii galgala sa’aatii tokko irratti har’a dorgomame kanaan Atileet Itaagany Maammoo meedaaliyaa warqee afraffaa Sintaayyahu Lawwuxany ammoo meedaaliyaa meetii 7ffaa argamsiisaniiru.
Chaampiyanshiippiin Atileetiksii Afriikaa 12ffaan har’a jalqabama
Finfinnee: Guraandhala 26, 2007 (Oromiya) Chaampiyanshiippii Atileetiksii Afriikaa 12ffaan har’a sirna hoo’aa ta'een Isteediyamii Finfinneetti jalqabama.
Chaampiyonshiippiin kun Muummichi Ministiraa Haayilamaariyaam bakka argamanitti sa’aatii 8 irratti ni jalqabama jedhamee eegamaa jira.
Chaampiyoonshiippii Atileetiksii Dargaggootaa Afriikaa waggoota lamaan dura Moorishiyas qopheessite irratti biyyoonni 29 kan hirmaatan wayita ta’u, inni Itiyoophiyaan har'arraa eegalee keessumeessitu biyyoota dabalataa haaraa 10 hirmaachisuun caalmaa akka qabu ibsameera.
Atileet Yoomiif Qajeelchaa shaampiyoonaa Atileetiksii Dargaggoota Afrikaa 12ffaatti nan-hirmaadha jedhe
Saturday, 28 February 2015 09:38
Finfinnee Guraandhala 20, 2007(Oromiyaa) Sababa miidhamaatiin baatiiwwan lamaaf dirree dorgommii irraa dhabamee kan ture Atileet Yoomiif Qajeelchaa shaampiyoonaa Dargagagoota Afrikaa 12ffaa Finfinneetti adeemsifamurratti akka hirmaatu dubbate.
Fiigicha meetira kuma shaniitiin Itiyoophiyaa bakka bu’uudhaan ALA bara 2013/14 meedaaliyaa warqii kan argamsiise Atileet Yoomiif Qajeelchaa miidhama irraa bayyanachuun akka fayyaa jiru hiammeera.
Shaampiyoonaa Atileetiksii Afrikaatiif qophiin akka xumurame himame
Finfinnee: Guraandhala 16, 2007 (Oromiyaa) Shaampiyoonaa Atileetiksii Afrikaa 12ffaa torban lama booda eegalamuuf qophiin xumuramaa akka jiru himameeera.
Koomishinarri koomishiinii Spoortii Federaalaa obbo Abdiisaa Yaadataa Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti akka himanitti shaampiyoona kanaaf qophiin barbaachisaan xumuramaa jira.
Dorgommii Maaraatoonii har’a Tookiyootti dorgomameen Atileetoonni Itiyoophiyaa milkaa’an
Finfinnee Guraandhala 15,2007(Oromiya) Dorgommii fiigicha maaraatoonii har’a Tookiyootti dorgomame irratti Atileet Indashaaw Nuguseefi Atileet Birhaanee Dibaabaa moo’achuun maqaa biyyasaanii waamsisan.
Dorgommii fiigichaa Atileetroonni Atileetoonni kumni 36 itti hirmaatan kana garee dhiiraatiin Atileet Indashaaw Nugusee sa’aatii 2fi daqiiqaa 05fi sakandii 59tti xumuruun 1ffaa galeera.
Atileetiin Keeniyaa Kiibroochiifi Atileetiin Ugaandaa Chuumbaan ammoo 2ffaafi 3ffaa ta’aniiru.
Atileet Ganzabee Dibaabaa fiigicha mana keessaa meetira kuma shaniitiin riikkardii fooyyeessite
Gareen biyyaalessaa Itiyoophiyaa umuriin waggaa 23 gadii gitasaa Suudaan wajjin morkachuufi
Torbe Kana 47414
Ji'a Kana 91255
01/05/07 irraa eggalee 7194124
Kan Amma Daawwachaa Jiran 55